खुल्ने भो भोलीको संसद्
निशान न्युज जेष्ठ २२, 2074
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको पुनः निर्वाचन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएको नेकपा एमालेले मंगलबारको संसद अवरुद्ध नपार्ने भएको छ । एमालेले मंगलबार हुने प्रधानमनत्रीको निर्वाचनका लागि निःशर्त संसद खोल्न लागेको हो । एमालेले संसद अवरुद्ध नगर्ने भएपछि नेपाली कांग्रेसका स...
प्रचण्डले सिंहदरवार छोड्ने बेला भने, ...
जेष्ठ २२, 2074 काठमाडौं । सोमबार सिंहदरवार छोडेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि आफु प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदरवार छिर्ने बताएका छन् । आलोपालो प्रणालीमा लागेका कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन लामो समयसम्म जारी रहने पनि संकेत गरे ...
परिवार दलले सरकारलाई समर्थन नगर्ने
जेष्ठ २२, 2074 काठमाडौं । साना दलमध्येको नेपाल परिवार दलले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई समर्थन नगर्ने भएको छ । दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले ब...
अदृश्य शक्तिको प्रभावमा निर्वाचन आयोग...
जेष्ठ २२, 2074 भक्तपुर । भरतपुर महानगरपालिकामा निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई नेकपा एमालेले अदृष्य शक्तिको चलखेल रहेको आरोप लगाएको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेले भरतपुर महानगरपालिकामा मत पत्...
चुनाव सर्दा देउवालाई फाइदा
जेष्ठ २१, 2074 काठमाडौं । आज हुने भनिएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सरेसँगै वर्तमान गठबनधन झनै बलियो बन्दै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालले भरतपुर महानगरपालिकामा पुनः मतगणनाको माग राख्दै संसद अवरुद्ध पार्ने योजना बनाएपछि मंगलबारस...
जेष्ठ २०, 2074 काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान गर्ने निर्णय गरेसँगै भोली हुने भनिएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन धरमरमा परेको छ । भरतपुरमा मतगणना हुनुपर्ने माग राख्दै संसद अवरुद्ध पार्दै आएको एमाले...
भरतपुरमा पुनः मतदान गर्ने आयोगको निर्णय
जेष्ठ २०, 2074 काठमाडौं । लामो विवादपछि अन्ततः भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १९ मा पुनः मतदान हुने भएको छ । मतगणना स्थल अनाधिकृत रुपमा कब्जा भएको पुष्टि भएको भन्दै आयोगले मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मत अवैध घोषित गर्दै मतदान रद्द गर्दै पुन...
देउवालाई सांसदको साथ, ओलीलाई घातैघात
जेष्ठ २०, 2074 काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि आज नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । आज प्रधानमन्त्रीका लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकप...
मधेशी मोर्चाले काग्रेस सभापति देउवाला...
जेष्ठ १९, 2074 काठमाडौं । संविधान संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा तत्काल यो सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । उनीहरुकै भाषामा यो सरकारमा सहभागी बन्नु भनेको खाली हात सरकारमा जानु हो । मोर्चाले विगतका सरकारसँग भएका सहमति पनि कार्यान्वयन नभएकाले अब बन्ने सरक...
चार दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका तिलक अस...
जेष्ठ १९, 2074 डडेल्धुरा, । नेपाली काँग्रेसले डडेल्धुराका गन्यापधुरा गाउँपालिकाका हमाल चार दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका हुन् । न्यायोचित रुपमा स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आमरण अनशनमा बसेका तिलक हमाल अस्पताल भर्ना भएका छन् । पुराना र योग्...
वामदेवलाई बलीको बोको बनाउने तयारी
जेष्ठ १९, 2074 काठमाडौं । आइतवार हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र राजनीतिक दलहरुले सहमतीय सरकार बनाउन नसकेपछि बहुमतीय आधारमा आइतवार प्रधानमन्त्रीक...
कार्यव्यवस्था परामर्श बैठक सकियो
जेष्ठ १९, 2074 काठामाडौं, । व्यबस्थापिका संसदको कार्यव्यबस्था परामर्श समितिको बैठक सकिएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा बसेको समितिको बैठकमा सभाुखले परामर्श लिएकी हुन् । संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि शुक्रबार सभामुख ओ...
निर्वाचन आयोग किन डराएको ?
जेष्ठ १८, 2074 काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य मीन विश्वकर्माले भरतपुरमा पुन निर्वाचन गर्नुपर्ने बताएका छन् । विश्वकर्माले निर्वाचन ऐन, निर्देशिका र आचारसंहिताले मतपत्र च्यातिए पुनः निर्वाचन गर्ने प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गरेक...
प्रधानमन्त्री निर्वाचन रोक्न संसद अवर...
जेष्ठ १८, 2074 काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता प्रकाश ज्वालाले भरतपुर महानगरपालिकामा तत्काल मतगणना नगरे एमालेले संसद अवरुद्ध जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले भरतपुरमा अप्रत्यासित घट्ना घटाउनेको पहिचान समेत भइसकेको अवस्थामा तत्काल मतगण...
च्यतिएको मतपत्र गन्न नसकिने
जेष्ठ १८, 2074 चितवन । गणनामा संलग्न नेपाली कांग्रेस उपमेयरकी उम्मेदवार पार्वती शाहले च्यातिएको ९० मतपत्र गन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताइन् । मिल्नेसम्म टेप लगाएर पनि मिलाइएको छ । तर, च्यातिएका मतपत्रहरु गन्न मिल्ने अवस्थामा छैन । एक मत...
← अघिल्लो 12… 203 204 205 206 207 208 209 210 211 पछिल्लो →